ISTICMAALKA UGU TALAGALKA Aaladda StrongStep® Adenovirus ee Tijaabada Degdega ah (Feces) waa tallaal degdeg ah oo muuqaal ah oo loogu talagalay ogaanshaha qiyaasta qiyaasta ee adenovirus ee tijaabooyinka saxarada aadanaha. Qalabkan waxaa loogu talagalay in loogu isticmaalo kaalmaynta baaritaanka infekshanka adenovirus. HORDHAC Adenoviruses Enteric, ugu horrayn Ad40 iyo Ad41, ayaa horseed u ah shuban-biyoodka carruur badan oo la ildaran cudur shuban-biyood ba'an, kan labaadna rotaviruses. Cudurka shuban-biyoodka ba'an waa sababta ugu weyn ee dhimashada ...
ISTICMAALKA UGU TALAGALAN Aaladda StrongStep® Giardia lamblia Antigen Rapid Test (Feces) waa tallaal degdeg ah oo muuqaal ah oo loogu talagalay tayada, ogaanshaha mala-awaalka ah ee Giardia lamblia ee tijaabooyinka saxarada aadanaha. Qalabkan waxaa loogu talagalay in loogu isticmaalo kaalin ahaan in lagu ogaado cudurka Giardia lamblia. Hordhac Infekshinka ku dhaca curyaaminta ayaa ah dhibaato caafimaad oo aad u daran adduunka. Giardia lamblia waa habka ugu caansan ee loo yaqaan 'protozoa' ee loo yaqaan inuu mas'uul ka yahay mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee shubanka daran ee dadka, ...
Tallaabo adag® H. pylori Antigen Rapid Test waa tallaal degdeg ah oo muuqaal ah oo loogu talagalay tayada, ogaanshaha mala-awaalka ah ee Helicobacter pylori antigen oo leh saxaro bini-aadam oo ah tijaabada.
HORDHAC Rotavirus waa wakiilka ugu caansan ee ka masuulka ah calool xanuun daran, badanaa carruurta yar yar. Soosaaritaankeedii 1973 iyo xiriirkii ay la laheyd caloosha-caloosha-yar-yar ee carruurta ayaa matalay horumar aad u muhiim ah oo ku saabsan daraasadda cudurka caloosha ee uusan sababin infekshinka bakteeriyada daran. Rotavirus-ka waxaa lagu kala qaadaa marinka afka-saxarada iyadoo muddada uurku ku jiro ay tahay 1-3 maalmood. In kasta oo tijaabooyinka la soo uruuriyay maalintii labaad iyo shanaad ee jirrada ay ku habboon yihiin antigen detectio ...
Faa'iidooyinka Xaqiijinta dareenka sare (89.8%), gaar ahaaneed (96.3%) ayaa lagu cadeeyay 1047 tijaabooyin caafimaad oo leh 93.6% heshiis marka la barbar dhigo habka dhaqanka. Hawl socodsiin sahlan oo hal talaabo ah, looma baahna xirfad gaar ah. Deg Deg Kaliya 10 daqiiqo ayaa loo baahan yahay. Qiyaasta keydinta heerkulka Qeexitaannada 89.8% Gaar ahaanshaha 96.3% Saxnaan 93.6% CE oo sumadaysan Qalabka Cabbirka = 20 tijaabooyinka Faylka: Buugta / Hordhaca MSDS Salmonella waa bakteeriya keenta mid ka mid ah cudurrada ugu caansan ee mindhicirka (mindhicirka) ku dhaca dixiriga ...
Hordhac Cudurka Daacuunka, oo uu sababo V.cholerae serotype O1, wuxuu wali sii wadaa cudur ba'an oo muhiimad weyn oo caalami ah ku leh dalal badan oo soo koraya. Caafimaad ahaan, daacuunku wuxuu u dhexeyn karaa gumeysi asymptomatic ilaa shuban daran oo leh dheecaan fara badan, taasoo keenta fuuqbax, khalkhalka elektroolka, iyo dhimashada. V. cholerae O1 wuxuu sababa shubankan qarsoodiga ah iyadoo la gumaysto xiidmaha yar iyo soo saarista sunta daacuunka ee xoogga leh, Sababtoo ah bukaan socod eegtada iyo cudurrada faafa ...
Tijaabada Vibrio cholerae O1-O139
Hordhac Cudurka daacuunka, oo ay sababaan V.cholerae serotype O1 iyo O139, ayaa weli ah cudur ba'an oo muhiimad weyn oo caalami ah ku leh dalal badan oo soo koraya. Caafimaad ahaan, daacuunku wuxuu u dhexeyn karaa gumeysi asymptomatic ilaa shuban daran oo leh dheecaan fara badan, taasoo keenta fuuqbax, khalkhalka elektroolka, iyo dhimashada. V.cholerae O1 / O139 ayaa sababa shubankan qarsoodiga ah iyadoo la gumaysto xiidmaha yar iyo soo saarista sunta daacuunka ee xoogga leh, Sababtoo ah kiliinikada iyo ...
Baaritaanka xubinta taranka dumarka
ISTICMAALKA UJEEDDADA ah StrongStep® Bacterial vaginosis (BV) Qalabka Tijaabada Degdega ah ayaa loogu talagalay inuu cabbiro pH siilka si loogu caawiyo baaritaanka cudurka Bakteeriyada. Hordhac Qiimaha pH siilka ee 3.8 ilaa 4.5 waa shuruud aasaasi u ah shaqada ugu wanaagsan ee nidaamka jirku u leeyahay ilaalinta xubinta taranka haweenka. Nidaamkani wuxuu si wax ku ool ah uga fogaan karaa gumaysiga cudurada keena iyo infekshinka xubinta taranka dumarka. Difaaca ugu muhiimsan uguna dabiiciga ah ee kahortaga dhibaatada siilka ...
HORDHAC Candidiasis Vulvovaginal (WC) waxaa loo maleynayaa inay tahay mid ka mid ah sababaha ugu badan ee astaamaha siilka. Qiyaas ahaan, 75% haweenka waxaa laga helaa Candida ugu yaraan hal jeer inta ay nool yihiin. 40-50% ka mid ah waxay la xanuunsan doonaan infekshano soo noqnoqday 5 %na waxaa lagu qiyaasaa inay ku dhacaan Candidiasis joogto ah. Cudurka 'Candidiasis' ayaa inta badan laga ogaadaa cudurada kale ee xubinta taranka dumarka. Calaamadaha WC oo ay ka mid yihiin: cuncun daran, xanuun siilka ah, cuncun, finan ku dhaca bushimaha kore ee siilka ...
HORDHAC Jabtada waa cudur ku dhaca galmada lagu kala qaado waxaana sababa bakteeriyada Neisseria gonorrhoeae. Jabtadu waa mid ka mid ah cudurrada faafa ee bakteeriyada faafa waxaana badanaa la isugu gudbiyaa xilliga galmada, oo ay ku jiraan galmada siilka, afka iyo futada. Noolaha sababi karaa wuu sumoobi karaa cunaha, wuxuuna soo saaraa dhuun xanuun daran. Waxay qaadsiin kartaa futada iyo malawadka, iyadoo soo saareysa xaalad loo yaqaan proctitis. Dumarka, waxay ku dhici kartaa xubinta taranka haweenka, taasoo ku keenta cuncun leh dheecaan (...
Imtixaanka degdegga ah ee loo yaqaan 'StrongStep® Chlamydia trachomatis' waa tallaal degdeg ah oo dhinaca dambe ah oo loogu talagalay ogaanshaha tayada qiyaasta ee Chlamydia trachomatis antigen ee kaadi mareenka ragga iyo xubinta taranka dumarka. Faa'iidooyinka Ku habboon oo dhakhso leh 15 daqiiqo ayaa loo baahan yahay, ka hortagga walwalka sugitaanka natiijooyinka. Daaweynta Waqtiga leh Qiimaha saadaalinta sareyso ee natiijada togan iyo qeexitaanka sare wuxuu yareeyaa halista isku xigxiga iyo gudbinta dheeraadka ah. Way fududahay in la isticmaalo hal nidaam, ma laha xirfado gaar ah ama waxbarid ...
ISTICMAALKA ISTICMAALKA Qalabka Loogu Talo Galay 'StrongStep® Cryptococcal Antigen Rapid Test' waa baaritaan dhaqso ah oo loogu tala galay baaritaanka antigens-ka loo yaqaan 'polypsaccharide antigens' ee isku dhafan noocyada 'Cryptococcus complex' (Cryptococcus neoformans iyo Cryptococcus gattii) ee ku jirta serum, plasma, dhiigga oo dhan iyo dareeraha laf-dhabarka maskaxda (CSF). Baaritaanku waa tijaabin dhakhtar oo laguu qoro oo la adeegsado oo ka caawin kara baaritaanka cudurka loo yaqaan 'cryptococcosis'. HORDHAC Cryptococcosis waxaa sababa labada nooc ee noocyada 'Cryptococcus com' ...
H. Pylori Ag Imtixaanka Degdega Ah Wuxuu Ogaadaa Antigen, Qalabka Imtixaanka Igm / Iggrapid, Novel Coronavirus Degdega ah Ket Test, Coronavirus ee Tijaabada Covid-19, Qalabka Coronavirus Antigen Test, Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Tijaabada Degdega ah,